Global Voices teny Malagasy » Takian’Ilay Fanentanana #StopLumadKillings (AtsaharoNyFamonoanaLumad) Ny Hiarovana Ireo Foko Manohitra Fitrandrahana Ao Atsimon’i Filipina · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 05 Oktobra 2015 5:14 GMT 1	 · Mpanoratra Mong Palatino Nandika avylavitra
Sokajy: Azia Atsinanana, Filipina, Fanoherana, Foko sy Fiaviana, Mediam-bahoaka, Politika, Teratany, Tontolo_iainana, Vonjy Voina, Zon'olombelona
Tamin'ny fanehoankevitra mahakasika ireo tatitra milaza fa ireo hetsika ataon'ny milisy sy ny asa fitrandrahana no mamindra toerana  ireo foko Lumad, marobe ireo Filipiana no niantso ny governemanta mba hihetsika haingana hampitsaharana ny herisetra atao an'ireo vahoaka indizena tompontany. Fiantso iraisan'ny rehetra ny hoe Lumad, entina hanondroana ireo foko indizena ao Mindanao, ilay nosy faharoa lehibe indrindra ao Filipina, any amin'ny faritra atsimon'ny firenena.
Notaterin'ireo mpitarika Lumad avy any amin'ny faritanin'i Surigao fa tafihan'ireo milisy ny sekoly sy ny vondrom-piarahamonin-dry zareo, nanery  olona maherin'ny 2.000 handao ny trano fonenany ka nankany an-tendrombohitra sy nitady fialofana  any afovoan-tanàna. Marobe ireo avy amin'ny vondrom-piarahamonina Lumad izay efa navitrika nanohitra ny fidiran'ireo orinasa mpitrandraka harena ankibon'ny tany. 
Ny Kaomisionam-Pirenena Momba ny Kolontsaina sy ny Taokanto (NCCA), masoivoho iray an'ny governemanta, dia namaritra ny herisetra atao amin'ireo Lumad ho toy ny fanafihana  atao amin'ny kolontsaina Filipiana :
Nandritry ny andro maro tamin'ny Septambra, nalaza tao Filipina ny tenifototra #StopLumadKillings ‬‬ tao amin'ny Twitter rehefa nandray ny tambajotra sosialy ry zareo Filipino mpisera amin'ny aterineto mba haneho ny firaisany hina amin'ireo Lumad nafindra toerana. Ireto ambany ireto ny sasany tamin'ny sary sy kisarisary fanehoana fanohanana ny Lumad :
Mpianatra avy amin'ny St Scho-Manila manao sakana maresaka be ho fanohanana ny #StopLumadKillings .
‪Victoria Tauli-Corpuz, mpitondra teny manokan'ny Firenena Mikambana momba ny resaka Zon'ireo vahoaka indizena sy Michel Forst misahana ny momba ireo toe-draharahan'ny mpiaro zon'olombelona, dia niantso  ny tafika hampitsahatra ny fibodoany ireo sekoly sasany an'ilay foko :‬
Ho azy ireo indray, nolavin'ny miaramila ny hoe nanao hetsika ivelan'ny tafika ry zareo mba hisotasotàna ireo vondrom-piarahamonina Lumad. Nisisihany ny hoe ny adim-poko no fototry ny herisetra any amin'ny faritra Lumad. Saingy tsy manaiky  izany ny governoran'ilay faritany ary niampanga ny miaramila ho nanangana milisy sy nanome fiadiana ho azy ireny. Efa nilaza ny hampanao fanadihadiana  momba ilay olana ny Loholona ao Filipina.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2015/10/05/75266/
 mamindra toerana: http://tonyocruz.com/?p=4805
 mpitrandraka harena ankibon'ny tany.: https://globalvoices.org/2015/03/13/look-what-large-scale-mining-did-to-these-four-beautiful-philippine-islands/
 tsy manaiky: http://www.mindanews.com/top-stories/2015/09/05/surigao-sur-gov-to-army-disband-disarm-bagani-forces/
 hampanao fanadihadiana: http://www.senate.gov.ph/press_release/2015/1002_guingona1.asp